JAAL JIRA & MID JIRRAN: 15 FARQI oo u dhexeeya saaxiibka caadiga ah & midka dhabta ah (Qaybtii 1-aad) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka JAAL JIRA & MID JIRRAN: 15 FARQI oo u dhexeeya saaxiibka caadiga...
JAAL JIRA & MID JIRRAN: 15 FARQI oo u dhexeeya saaxiibka caadiga ah & midka dhabta ah (Qaybtii 1-aad)
(Hadalsame) 20 Luulyo 2020 – Waxaa dunida maanta aad loogu doodaa cidda rasmiyan lagu tilmaami karo saaxiib sax ah oo u qalma inb wax lagu darsado, lala qado, lala quuto, qudha loo huro isla markaana lala qariibo.
Halkan waxaannu idiinkugu haynaa 15 astaamood oo ay ku kala duwan yihiin saaxiibka caadiga ah iyo midka dhabta ah.
1. Saaxiibka caadiga ihi adiga ayuu cunto ku waydiisanayaa. Saaxiibka runta ihi (Argentinean friend), wuxuu noqonayaa sababta aad raashin miiska usoo saarayso.
2. Saaxiibka caadiga ihi wuxuu ku waydiiyaa, “Sidee tahay?” marka uu ku arko. Saaxiibka dhabta ihi hab ayuu ku siinayaa isagoo kugu leh “Bal is fiiri, hooyadaa haku waydee, waxaad u muuqataa mid cajiib ah!”
3. Saaxiibka caadiga ihi abid kuma arag adiga oo ooyaya. Saaxiibka dhabta ihi se marar badan ayuuba kula baroortay.
4. Saaxiibka caadiga ihi ubaxyo ayuu kuusoo diraa marka aad isbitaalka taallo. Yeelkeede, midka dhabta ihi wuxuu habeenkaa hurdayaa kursi yar oo ag yaalla sariirta aad saaran tahay ee aad ku xanuunsanayso.
5. Saaxiibka caadiga ihi wax buu kaa amaahanaya wuuna kuusoo celinayaa 2 maalmood kaddib. Saaxiibka dhabta ihi wax buu kaa amaahanayaa wuxuuna todobaad kaddib illaawayaa inuuba adiga wax kaa qaaday, dib dambena usoo celin maayo, adna abidkaa waydiin maysid.
Previous articleDHEGEYSO: Soomaali safarkii jeclaatay kaddib markii la hakiyey duullimaadyadii caalamiga ahaa!!
Next articleGOOGOOSKA: Juventus vs SS Lazio 2-1 (Bianconeri oo baxsatay)
(Abuu Dabeey) 26 Okt 2020 - Khabib Nurmagomedov ayaa la sheegayaa inuu feerkii ugu dambeeyey ka helay kharashkii abid ugu badnaa kaddib markii uu...